Alarobia 28 Aprily 2021 – FJKM
Mba hiorenana amin’ny fanavotan’i Kristy sy hahazoana miaro ny finoana masina dia tsara ny :
1-Mitadidy ny fampianaran’ny Apostoly
Manoloana ny fiainam-pinoana dia tokony tsy hahataitra ny mpino ny fisian’ireny mpampianatra sy mpaminany sandoka ireny . Ny fahaizantsika mpino izay voalaza ao amin’ny Soratra Masina no handresena azy ireny . Tsara ny mahatakatra izay voambara ao amin’ny Baiboly , ary afaka mampiasa izany araka izay ilana azy handresena ny fahavalo (Mat 4.4,7,10) . Tsy hoe : mitadidy ihany fa ampiasaina amin’ny ilana azy ny Soratra Masina .
2-Mivavaka amin’ny Fanahy Masina
Ambaran’i Joda eto izay ho fifandraisan’ny mpino amin’Andriamanitra , izay adika hoe : ao amin’ny Fanahy Masina . Toa manambara sady mampahatsiahy antsika izay fifandraisan’Andriamanitra sy ny Fanahy Masina . Aoka ho feno ny Fanahy isika (Efe 5.18) ary hiankina amin’ny Fanahin’ny Fahamarinana (Jao 14.17) Koa raha tsy eo ny Fanahy dia tsy afa-manao na inona na inona amin’ny alalan’ny tenantsika samirery isika (Zak 4.6 )
3-Mitoetra maharitra amin’ny fitiavana
Io fitiavana io no marika hahalalana fa mpianatr’i Kristy ny mpino (Jao 13.35) . Efa tafiditra ao amin’ny fianakavian’Andriamanitra isika noho ny fitiavany . Manentana indray i Joda eto manao hoe : tehirizo ny tenanao ao amin’ny fitiavan’Andriamanitra ka mahandrasa (and21)
Mba mitoetra maharitra amin’ny fitiavan’i Kristy ve ny Fiangonana ?